RM PHYSIO - RUBPAGE // Muviri Rubha / NuRu Eotic Massage
Hondo Creek, MI
Kedari Rapids, IA
Corner Brook, Newfoundland uye Labrador
Yakakwira Point, NC
Hilton Musoro Island, SC
Inland Humambo, CA.
Jefferson Guta, MO
Johnson Guta, TN
Nyanza Charles, LA
Dombo Diki, AR
Yakareba Beach, CA
Mason Guta, IA
Mushonga Hat, Alberta
Moncton, Nyowani Brunswick
Gomo reVernon, WA
Musuru Shoals, AL
Nyowani Bedford, MA
Newport Nhau, VA
Owen Inzwi, Ontario
Panama Guta, FL
Runyararo Rwizi Nyika, British Columbia
Pocono Zvitubu, PA
Muchinda George, British Columbia
Quebec Guta, Quebec
Inokurumidza Guta, SD
Tsvuku Derere, Alberta
Dombo Zvitubu, WY
Mutsvene Cloud, MN
Mutsvene Paul, MN
Santiago anobva ku cali
Ratidza Pasi, AZ
Sioux Guta, IA
Maodzanyemba Burlington, VT
John, New Brunswick
St. John's, Newfoundland uye Labrador
Steamboat Zvitubu, CO
Pfuma Coast, FL
Whistler, weBritish Columbia
Yellowknife, Northwest Matunhu
Shambadza Yako Massage Services
0 (0 mazano)
Mumwe mudiwa wako ari kurarama aine chirwere chisingaperi, achirwara kubva kurwara, kana kungoda rubatsiro rwemazuva ese? Usatsvage zvekuenderera mberi sezvo isu tine nyanzvi dzekuendesa chaiyo mhinduro inokodzera kune yako chaiyo yekurapa inoda. Nezvinangwa zvekudzidzisa, Nuru masaja inozivikanwa kune vese sezvo paine anotyisa eerotic masseuse uko. Mumwe anogona kuronga nuru muMiami, FL pasina kupa chero yechipiri kufunga. Nuru massage inopihwa nevakadzi pasi rese. Miami iri muSouth Florida, inova paradhiso pachayo. Zvakare kunakidzwa hakumire panuru, kune zvimwe zvakawanda zvinosanganisira anofara maawa uye nekukuendesa kune imwe nyika. Nuru ari kushaya masero michina. Massage iri kupihwa nemasseuse akadzidziswa Masaseuse angave echirume kana echikadzi uye anokwezva kwazvo. Nuru masaja maitiro anobva kuguta reKawasaki (Japan). Kazhinji, mamwe mafuta kana zvigadzirwa zvejel zvinoshandiswa mukushambadza basa iro riine imwe inosemesa mhando yehwema, kuravira, uye dzimwe nguva yero kana yeruvara rweorenji muvara. Ndichiri pano muNuru pane gel rinoshandiswa zvakafanana harina ruvara, harinakidze, uye harinhuwi. Sezvo Nuru iri erotic mhando yekukwiza muviri, inoda imwe kana kupfuura masseuse kukwiza miviri yavo kumuviri wemutengi. Kune izvi, mapato ese ari maviri akashama uye akafukidzwa nemafuta ekuzora. Nuru izwi rinobva mumutauro wechiJapan zvine chirevo chakatsetseka. Munguva iyi nuru kurapa kurapa mutori wechikamu anowana mukana wakafararira unobata kumuviri wemasseuse. Zvakare, masseuse hairambe kubata muviri kuti uwane zvinhu zvizere. Iyo nuru gel is sulfated polysaccharide fucoidan, iyo inotorwa kubva kumashizha eiyo yakasvibira yegungwa yegwenzi Sphaerotrichia divaricate. RMPhysio inotungamirwa naRaul Mosqueira (RM), ane ruzivo rwunopfuura makore gumi, akasimbiswa mukukwiza muviri muna 2008. Anozvirumbidza neruzivo rwakakura munzvimbo dzehutano, neChiropractors, uye nekubatana nevamwe vakasiyana vehutano. Nyanzvi mune yakavanzika tsika ine hunyanzvi hwe:
Mhuka yakadzika inonzi massage
Kuburitsa mudumbu yehutano hwevakadzi
Neuromuscular therapy muMiami.
Kusunungurwa kweMyofascial muMiami
Kusunungurwa kweMyofascial rudzi rwehutano hwepanyama hunowanzoshandiswa nevarapi kurapa myofascial pain syndrome. Myofascial pain syndrome chirwere chisingaperi chinorwadza chinokonzerwa nekunzwa uye kuomarara mumatumbu ako anogona kusununguka ne nuru massage varapi. Aya matishu akakomberedza uye anotsigira mhasuru mumuviri wako wese uye kurwadziwa kwacho kunowanzo kutangira kubva kune chaiwo mapoinzi mukati memuviri wako wemyofascial anonzi "trigger points."
Kuburitswa kwemyofascial kunopihwa nemasaji Therapist muMiami inotarisa pakuderedza marwadzo nekurerutsa kusagadzikana uye kuomarara mumatangi anotangisa. Murapi wako achapuruzira zvinyoronyoro iyo Myofascia uye anzwe nzvimbo dzakaomarara kana dzakasimbiswa. Iyo yekurapa murapi ichatanga kukwiza uye kutambanudza nzvimbo dzinonzwa kuomarara neyakareruka manyorerwo ekumanikidza & zvobva zvabatsira iyo turu uye inotsigira sheath mukuregedza kumanikidza uye kuomarara. Maitiro acho anodzokororwa kanoverengeka nemurapi pane imwechete poindi poindi uye pane mamwe marangi poresi kusvikira murapi anzwa kuti kushushikana kwasunungurwa zvizere.
Anofara Kupedza Massage Kuburitswa muMiami. Myospinal kuburitswa inotarisa pakuburitsa mhasuru spasm pamwe nemuzongoza kusanganisira iyo sub occipital mhasuru (mhasuru pazasi peiyo cranium). Mazhinji emhasuru dzakakura, dzakasimba dzakanamatira kumusana. Misimba inodarika mazana manomwe inoita 700/2 yehuremu hwemuviri.
Chinangwa cheMyospinal kuburitswa neichi ndechekudzivirira huropi uye musana wesipinha unoumba tsinga. Kubva pane fungidziro yekuti tsinga uye endocrine (mahormone) masystem anodzora mashandiro ese mumuviri, inotarisira kuburitsa tsvina tsvina izvo zvinogona kugadzira kupindira mukushanda kwemaitiro akakosha aya. Myospinal Release inoshandisa zvinyoro-nyoro, zvisina-invasive zvishandiso nemaoko-pane matekinoroji kubatsira muviri kuburitsa isingagumi para-vertebral mhasuru spasm, ichisunungura iyo nerve system kuve nechokwadi chakanyanya kutapurirana nekuita. Massage Therapist muMiami inotora maminetsi gumi kuburitsa marwadzo.
The mutambo wetsi chaizvo zvakabva kunzira yekuSweden yekukwiza iyo inogamuchirwa uye inoitwa nema massage Therapists muMiami.
Sports masaja ndeimwe yenguva-dzese inodiwa yekukwiza kwemitambo inoda vanhu. Kana iwe uri shasha yekurovedza muviri kupfuura iwe zvaunofanirwa kufunga zvakanyanya kurapa kurapa sechikamu cheyakajairwa mararamiro sarudzo. Iyi ndiyo nzira yakanaka yekusanganisa kushushikana muchirongwa chako chekuita. Mune irudzi urwu murapi anonyatso kupa musanganiswa wemaitiro akasiyana siyana. Mune aya akadzika masuruji anoburitsa zvinwiwa uye kusagadzikana mukati memasuru akadzika. Mhedzisiro yacho inowanzo kunonoka, asi zuva rinotevera ruzhinji rwekunzwa rwakagadziridzwa zvakanyanya. Zvakanakira kutora mitambo yekushambadza nachiremba muMiami zvinotevera:
Yakagadziridzwa kutenderera kweropa uye huwandu hwekudya kwemhasuru. Yakagadziridzwa renji yekufamba uye mhasuru kuchinjika. Inobatsira kupfupisa kupora nguva pakati pekushanda.
Reflexology massage muMiami zvakare mufaro mukuru. Massage Therapists muno muMiami vane moyo munyoro vachipa iyi mhando yemasaji. Reflexology inozivikanwa zvakare senzvimbo yekurapa. Iyo yakafanana neyakafanana neyekushambadza nuru asi isina kusanganisira mafuta kana gel. Iyo yakavakirwa pane pseudoscientific system yenzvimbo uye nzvimbo dzinofungidzira izvo zvinofungidzirwa kuratidza mufananidzo wemuviri kumakumbo nemaoko nachiremba nemuronga wekuti basa rakadai rinokanganisa shanduko yemuviri kumuviri. Nokurwadziwa uye kunzwisisika mutsoka, chitsitsinho, uye mhuru nzvimbo, ive shuwa yekutaurirana ako marwadzo netiresi yako panguva yekurapa kwako kuzorora kuri nani.
Ratidza zvimwe Viga zvese
Taura RubPage.com paunosheedza :)
2911 Bridgeport Ave, Miami, FL 33133, USA
+ 1 (786) 587 4481
0 Base pane 0 Ongororo
Ndokumbirawo mugadzirise iyo captcha
Zvepanyama Muviri Rub Directory - shambadza Erotic yako kana
Nuru yekukwiza hunyanzvi paRubPage kuti uwane chaiwo mafoni!
Kuchema Massage NYC
Jake Shamwari Chitoro
2020 © RubPage.com - Erotic Muviri Rub Massage, Nuru Masseuse uye Tantra Vanopa.
Log in Nyorera
Akaunti kana Email
Forgot password? Dzosera password.
Kutumira Login info, ndokumbira umirire ...
Kutumira info, ndokumbira umirire ...
Tora password itsva
Kutumira rejista info, ndokumbira umirire ...